GỤỌ NKE Albanian Amharic Arabic Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Finnish French Georgian German Greek Hiligaynon Hungarian Igbo Indonesian Isoko Italian Japanese Korean Lithuanian Macedonian Malagasy Maya Myanmar Norwegian Ossetian Polish Portuguese Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Rarotongan Romanian Russian Samoan Sepedi Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tajiki Thai Tsonga Turkish Ukrainian Vietnamese
Otú ị ga-esi mee ya: Nọrọ n’ebe ụzụ na-adịghị mee ihe omume a. Mgbe ị na-agụ amaokwu ndị a, were ya na ị nọ mgbe ihe ahụ ị na-agụ mere. Jiri uche gị kirie ebe ọ na-eme. Nụrụ ihe ndị nọ n’ebe ahụ na-ekwu. Gbalịa ka ị ghọta otú obi dị ndị ị na-agụ akụkọ ha. Ka ihe ị na-agụ yie gị ka ọ̀ na-eme eme ugbu a.
Ndị a kọrọ akụkọ ha: Ịlaịja, Ehab, na narị ndị amụma Bel anọ na iri ise
Ihe a kọrọ: Ịlaịja gosiri na Jehova karịrị Bel.
1 CHEBARA OTÚ IHE A SI MEE ECHICHE.—GỤỌ 1 NDỊ EZE 18:17-40.
Were mpempe akwụkwọ ọzọ see ebe i chere Ịlaịja nọ, ebe ndị amụma Bel nọ, nakwa ebe ebe ịchụàjà ndị ahụ dị.
Olee ụdị ụda ị na-anụ mgbe ihe ahụ a kọrọ n’amaokwu nke 26 ruo nke 29 na-eme?
Olee otú i chere obi dị Ịlaịja mgbe ọ na-agwa ndị amụma Bel okwu?
2 LEBAKWUO YA ANYA.
Gịnị mere obi ike ji dị Ịlaịja mkpa mgbe ọ chọrọ ịgakwuru Ehab na mgbe ọ chọrọ igosi chi nke bụ́ ezi Chineke, bụ́ nke ga-emechu ọtụtụ narị ndị amụma Bel ihu? (Ihe ga-enyere gị aka: Gụọ 1 Ndị Eze 18:4, 13, 14.)
Jiri ihe e ji eme nchọnchọ i nwere chọpụta ihe ụfọdụ banyere ofufe Bel. Dị ka ihe atụ, olee omume ndị a na-eme mgbe a na-efe Bel? Olee otú ofufe Bel si metụta ndị Izrel?
Olee ihe i chere mere Ịlaịja ji gwuo olulu gburugburu ebe ịchụàjà Jehova ma kwuo ka a gbajuo ya mmiri?
3 MEE IHE Ị MỤTARA. DEE IHE Ị MỤTARA BANYERE . . .
Obi ike mmadụ kwesịrị inwe iji gbachitere ezi ofufe.
Uru ndị nwere ụdị obi ike ahụ na-erite.
ỤZỌ NDỊ ỌZỌ Ị GA-ESI MEE IHE Ị MỤTARA.
Olee ebe ma ọ bụ ebe ndị i nwere ike igosikwu obi ike iji na-agbachitere ezi ofufe?
4 OLEE IHE KACHA BAARA GỊ URU N’AKỤKỌ A? Ọ̀ BỤ MAKA GỊNỊ?
Ọ bụrụ na i nweghị baịbụl, gwa ndịàmà jehova ka ha nye gị otu, ma ọ bụ gị amatakwuo banyere ya na www.watchtower.org na www.jw.org
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Gbachitere Ezi Ofufe!